🥇 uphendlo lwamashishini amatyala
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 845
Ividiyo ye-accounting yamashishini etyala
Uku-odolwa kwengxelo yamashishini etyala
Ukwanda kwesidingo sabantu semali mboleko kunyanzela uqoqosho lweli lizwe ukuba lenze amaziko akhethekileyo akwazi ukubonelela ngeenkonzo ezinjalo. Ukwenza i-akhawunti kumashishini okuthenga ngetyala kufuneka kugcinwe ngokuqhubekayo kwaye ngokulandelelana kwawo ukubonelela ngolawulo ngolwazi olupheleleyo. Ezi femu zijolise kubathengi kwaye zikulungele ukubonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo.
Ukwenza ingxelo ngamashishini okuthenga ngetyala kugcinwa ngokwemigaqo nemigangatho esekwe, echazwe kwimithetho yomanyano nakwamanye amaxwebhu olawulo. Iinkqubo ezizodwa zinokuzenzekelayo kwimisebenzi ngexesha elifutshane. Kubalulekile kuphela ukuba ukhethe isoftware elungileyo elandela imisebenzi ethile.
Isoftware ye-USU inokusebenza kwiinkampani ezahlukeneyo, ngaphandle kwesikali somsebenzi wabo. Ivelisa ingxelo ye-accounting kunye nerhafu ekupheleni kwexesha lokunika ingxelo. Oku kubaluleke kakhulu kwiziko lokuthenga ngetyala, njengoko ngokungenisa ngendlela amaxwebhu ukuqhubeka nokuxhasa ngemali. Izikhombisi zezezimali zihlalutywa rhoqo ngekota ukujonga inqanaba lenzuzo, ebonisa uphawu lweshishini.
Ityala, i-inshurensi, imveliso kunye nemibutho yezothutho ifuna ubalo olukumgangatho ophezulu. Kubalulekile kubo kungekuphela ukuba benze umsebenzi wabo ngokuzenzekelayo kodwa kunye nokwenza ngcono iindleko. Ukuze ube nokhuphiswano kushishino, kuya kufuneka ujonge esweni ukusebenza kweemarike kunye nokwazisa ubuchwepheshe obutsha. Okwangoku, ukukhula kwamashishini okuthenga ngetyala sele efikelele kumakhulu ngonyaka. Iinkampani ezintsha ziyavela okanye ezindala ziyahamba. Kukho uhlaziyo rhoqo, ke kubalulekile ukuba ugcine umnwe wakho kubetha.
Umthetho welizwe uhlala uhlaziya imigaqo yobalo, ke kuya kufuneka uhlaziye ubumbeko. Ukuze ungakhathazeki malunga nokuhambelana kwezalathi, kuya kufuneka usebenzise isoftware eya kuthi ngokuzimeleyo ifumane idatha nge-Intanethi. Ivenkile yokuma kwindawo enye yahlukile kwabo ikhuphisana nabo kuba iphumeza utshintsho kwi-Intanethi kwaye ayithobeli imveliso.
Ukwenza i-akhawunti kumashishini okuthenga ngetyala kukwenziwa ngokuchanekileyo kwamaxwebhu, iingxelo, iincwadi kunye neemagazini. Ngoncedo lweenkqubo ze-elektroniki, oku akuthathi xesha lide. Iitemplate zentengiselwano eziqhelekileyo zivumela abasebenzi ukuba benze ngokukhawuleza ukuthengiselana kunye nezicelo zenkqubo. Xa ucela idatha kubaphathi, ingxelo inokuthunyelwa nge-imeyile. Yile ndlela iindleko zexesha elungiselelwe ngayo. Oovimba abongezelelweyo basetyenziselwa ukuphuhlisa imisebenzi emitsha nokubeka iliso kwimfuno zentengiso.
Isoftware ye-USU eyilelwe amashishini okuthenga ngetyala ikhathalela abathengi bayo. Ixhobisa nawuphi na umbutho. Awungekhe usebenze kwilizwe lakho kuphela kodwa nakwamanye amazwe. Ngenxa yenguqulo yolingo, unokuvavanya konke ukusebenza ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo. Ukuyithenga, yiya kwiwebhusayithi yethu esemthethweni, apho zonke iinkcukacha ezifanelekileyo malunga neemveliso zethu zinikezelwa. Ngapha koko, kukho unxibelelwano lweengcali zethu kunye nokuxhasa. Batsalela umnxeba ngeenkonzo zolondolozo ezongezelelekileyo okanye uodole iimveliso ezintsha kwaye uhlele ubalo lweshishini lakho letyala.
Inkqubo yobalo lwamashishini amatyala sisona sisombululo sisiso sokuqinisekisa ngenzuzo yenkampani njengoko ibonelela ngamathuba angenamda kuloo nto. Ukusebenza kwayo ekumgangatho ophezulu kuyilwe ziingcali zethu, zisebenzisa iindlela zokugqibela zetekhnoloji yekhompyuter kunye neziqinisekiso zabo. Inkqubo yethu inokwenza ukuqhubekeka ngokukhawuleza kwezicelo ezingenayo. Iququzelela ngokubonakalayo umsebenzi wabasebenzi, ikhulisa imveliso kunye nokusebenza kakuhle, kwaye inegalelo ekunyukeni kwengeniso kwishishini lokuthenga ngetyala, eliluncedo kakhulu. Ngaphaya koko, isicelo siyaqinisekiswa ngezakhiwo eziphezulu zomsebenzi kunye nezinto eziqinisekisa umgangatho. Kwangelo xesha, ixabiso lesoftware yobalo alikho phezulu kwaye lifikeleleke kuwo onke amashishini okuthenga ngetyala. Lo ngumgaqo-nkqubo wethu ocacileyo, obonisa isimo sethu esihle kubathengi, sonyusa ukuthembeka kwabo nokuzithemba kuthi.
Zininzi ezinye izibonelelo ezibonelelwa yi-USU Software, kubandakanya imenyu efanelekileyo, uyilo lwangoku, umncedisi owakhelweyo ngaphakathi, ukufikelela kwigama lokungena kunye negama lokugqitha, ukukhutshwa kwemali-mboleko, ukwenziwa kweshedyuli yokuhlawula, ukubalwa kwemali yokuhlawula, ukubalwa kwemali kunye nokunika ingxelo ngerhafu, uxwebhu iitemplate zemboleko, ezothutho kunye nemibutho yezentengiselwano, istatic and analytical accounting, ingxelo yebhanki, ukuthotyelwa komthetho welizwe, ukukhetha useto lwenkqubo, ukuyilwa komgaqo-nkqubo welizwe, iincwadi ezizodwa zokubhekisa kunye nokuhlelwa, kusetyenziswa i-vibe, ukuzimisela unikezelo kunye nemfuno, umphathi womsebenzi, ukuthumela izaziso, ukudityaniswa kwesiza, ukwenziwa kwezicelo nge-Intanethi, ukuthunyelwa kwemiyalezo ngobuninzi ngeSMS kunye ne-imeyile, ulawulo lokuhamba kwemali, ukuchongwa kwentlawulo ezifika kade, uvavanyo lomgangatho wenkonzo, ulawulo lwenkqubo, izatifikethi zobalo, Ukulungiswa kwemivuzo, itshathi yeeakhawunti, ukubalwa kwabasebenzi, ukugcinwa kwemali, inkonzo yokujonga ividiyo xa uceliwe, ukudluliselwa Ukwenza isiseko sedatha esivela kwenye inkqubo, uhlalutyo lwengeniso nenkcitho, iincwadi ezizodwa kunye neemagazini, ulwazi olululo, ukusebenza ngeemali ezahlukileyo, ukubalwa kwamatyala, iiakhawunti ezihlawulwayo nezifumanekayo, ii-odolo zemali, iitemplate zokuposa ingxelo, intlawulo epheleleyo kunye epheleleyo, unxibelelwano nentlawulo Iiterminal xa kuceliwe, ukudityaniswa kunye nokwaziswa, ukwandiswa kwengxelo, amaxabiso okubolekisa, ukusetyenziswa kweenkampani ezinkulu nezincinci, kunye nokudala izinto ezingenamda.